देखेर पनि नदेखेको जस्तै नगर्नु होला ! भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ ! साथै हस्तरेखा बाट भबिस्य जन्नुहोस
काठमाडौं । हस्तरेखा विज्ञानमा विश्वास गर्ने हो भने सबै कुरा हातले नै निर्धारण गर्छ । हस्तरेखाहरु मानव जन्मदा नै तयार भएर आएका हुन्छन् । शास्त्र अनुसार जुन व्यक्तिको हातको औला जौ जस्तो हुन्छ त्यस्ता व्यक्ति निकै धनी हुन्छन् । समाजमा प्रतिष्ठित पनि बन्नेछन् । त्यस्तै हातमा शंखरेका हुनु निकै उत्तम मानिन्छ ।
जुन व्यक्तिहरुको चारवटा औलामा शंख चिन्ह छ, ति व्यक्तिहरु उच्च पदमा पुग्ने र राजकीय सम्मान प्राप्त गर्ने हुन्छन् ।५ वटै औलामा शंख भएकाहरु विदेश यात्रामा निस्कन्छन् भने ६ औलामा शंख भएकाहरु धार्मिक र दश ओटै औंलामा भएकाहरु माहात्मा हुने विश्वास छ । ८ वटा औलामा शंख भएकाहरु भने सुखी र धनी हुन्छन् ।हातमा चक्र हुनेहरुलाई पनि भाग्यमानी मानिन्छ । १० वोटै औलामा चक्र भएकाहरुले संसार जित्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । एउटा मात्र चक्र भएको मान्छे बुद्धिमान हुन्छ भने दुइवटा भएको व्यक्ति सुन्दर हुन्छ ।
फेला पर्यो तीन आँखाँ भएको शर्प